Bit By Bit - Ethics - 6.6.1 oggolaansho la wargeliyey
Cilmi waa in,, hana raaci karo xukunka, nooc ka mid ah ogolaanshaha cilmi ugu.
Ogolaanshaha la wargeliyay waa fikrad aasaasi ah -waxaa laga yaabo in ay yiraahdaan caqabad dhow (Emanuel, Wendler, and Grady 2000; Manson and O'Neill 2007) - anshaxa cilmi-baarista. Nidaamka ugu fudud ee anshaxa cilmi-baarista ayaa leh: "Ogolaansho la ogeysiiyay wax walba." Qodobkan fudud, si kastaba ha ahaatee, ma ahan mid u dhigma mabaadi'da asaasiga ah, xeerka anshaxa, ama dhaqanka cilmi-baarista. Taa baddalkeeda, cilmi-baarayaashu waa inay, sameeyaan, oo raacaan sharciyo badan oo adag: "nooc ka mid ah ogolaanshaha cilmi-baarista badankood."
Marka hore, si aad uga baxdo fikrado aad u fudud oo ku saabsan ogolaansho wargalin ah, waxaan rabaa in aan kuu sheego wax badan oo ku saabsan tijaabooyinka gudaha si aad u barato takoorka. Daraasooyinkan, codsadayaasha been-abuurka ah ee leh astaamo kala duwan-waxay yiraahdaan ragga qaarkood iyo haweenka qaarkood-waxay dalbadaan shaqooyin kala duwan. Haddii nooc ka mid ah codsadaha la kireysto marar badan, dabadeed cilmi-baarayaashu waxay soo gabagabeyn karaan in ay jirto kala-takoorid ku saabsan habka kireysiga. Ujeedooyinka cutubkan, waxa ugu muhiimsan ee ku saabsan tijaabooyinkaas waa in ka qaybgalayaasha tijaabooyinkan-loo-shaqeeyaha-marnaba aan bixin ogolaansho. Dhab ahaantii, ka qaybgalayaashan ayaa si khiyaano leh loo khiyaameeyay. Hase yeeshee, tijaabooyin goobeed oo lagu barto takoorka ayaa lagu sameeyey ugu yaraan 117 daraasadood oo ku yaal 17 dal (Riach and Rich 2002; Rich 2014) .
Cilmi-baarayaasha isticmaala tijaabooyinka goobaha lagu barto takoorka waxay aqoonsadeen afar muuqaal oo daraasaddan ah, si wadajir ah, iyaga oo anshax ahaan loo oggolaan karo: (1) dhibaatada xadidan ee loo-shaqeeyayaasha; (2) faa'iidada weyn ee bulshadeed ee haysashada qiyaasta la isku halleyn karo ee takoorka; (3) daciifnimada qaababka kale ee lagu cabbiro kala-takoorka; iyo (4) xaqiiqda ah in khiyaamadu si xad dhaaf ah u jebinayso xeerarka goobtaas (Riach and Rich 2004) . Mid kasta oo ka mid ah xaaladahan waa mid muhiim ah, oo haddii mid ka mid ah aysan ku qanacsaneyn, kiiska anshaxu wuxuu noqon doonaa mid aad u adag. Saddex ka mid ah sifooyinkaasi waxaa laga soo qaadan karaa mabaadi'da anshaxa ee Belmont Report: dhibaatada xadidan (ixtiraamka dadka iyo faa'iidada) iyo faa'iido weyn iyo daciifinta hababka kale (Faa'idada iyo Caddaaladda). Muuqaalka ugu dambeeya, shuruucda aan caadiga ahayn, waxaa laga soo qaadan karaa Warbixinta Menlo ee Xushmadda Sharciga iyo Dulmiga Dadweynaha. Si kale haddii loo dhigo codsiyada shaqaaluhu waa goob ay horeba u sugayeen rajo xumo. Sidaa awgeed, tijaabooyinkaasi ma aha kuwo diidaya muuqaal anshaxeed oo horayba leh.
Ka sokow dooddan mabaadii'da ku salaysan, daraasiin ka mid ah IRBs ayaa sidoo kale soo gabagabeeyay in la'aanta ogolaanshaha daraasaddan ay la socoto xeerarka jira, gaar ahaan Xeerka Guud ee §46.116, qayb (d). Ugu dambeyntii, Maxkamadaha Mareykanka waxay sidoo kale taageereen la'aanta oggalaansho iyo isticmaalka khiyaamo ee tijaabooyinka goobaha si loo cabbiro kala-takoorka (Nambarka 81-3029 Maxkamadda Mareykanka ee Rafcaanka, Qodobka toddobaad). Sidaa darteed, isticmaalka tijaabooyinka gudaha ee aan lahayn oggolaansho waxay la socotaa mabaadi'da asaasiga ah ee jira iyo sharciyada jira (ugu yaraan sharciyada Mareykanka). Sababtaas waxaa taageeray bulshada cilmi-baarista bulshada, daraasiin ka tirsan IRBs, iyo Maxkamadda Rafcaanka ee Maraykanka. Sidaa daraadeed, waa inaan diidnaa xeerka fudud "Ogolaansho la ogeysiiyay wax kasta". Tani maaha sharci in cilmi-baarayaashu raacaan, mana aha mid ay tahay inay raacaan.
Ka gudubka "Ogolaansho la ogeysiiyay wax kasta" waxay ka tagayaan cilmi-baarayaasha su'aal adag: Waa maxay noocyadda ogolaashaha loo baahan yahay noocyada cilmi-baarista? Dabcan, waxaa jiray dood badan oo ku saabsan su'aashan, inkasta oo badankoodu ay ku jiraan qaabka cilmi-baarista ee da'da isku-jirka ah. Soo koobidda doodda, Nir Eyal (2012) wuxuu qoray:
"Faragelinta ayaa khatar badan ku, ayaa in ka badan ay tahay a-saameyn sare ama kama dambays 'doorasho nolosha ee muhiimka ah' ah, ka badan waa qiimaha-raran iyo muran, aagga gaar ah oo dheeraad ah ee jidhka taas oo faragelin toos ah u saameeyaa, ayaa in ka badan dagaalada iyo horjooge dhakhtar ah, sare ee baahida loo qabo in ogolaansho adag wargeliyey. Marar kale, baahida loo qabo in aad u xooggan ku wargeliyay oggolaanshaha, iyo dhab, waayo oggolaansho of qaab kasta, waa ka yar. On jeer kuwa, kharashka sare si fudud u tirtirto laga yaabaa in baahida loo qabo in. "[Xigashooyinka gudaha saaray]
Fikradda muhiimka ah ee dooddani waa in ogolaansho la wargeliyay aysan ahayn mid ama wax kale: waxaa jira noocyo xoogan oo daciif ah oo ogolaasho ah. Xaaladaha qaarkood, ogolaansho wacyigelin leh ayaa u muuqata in loo baahan yahay, laakiin kuwa kale, qaababka daciifka ah ayaa laga yaabaa inay ku habboonaadaan. Marka xigta, waxaan ku sharxi doonaa saddex sababood oo ay tahay in cilmi-baadhayaashu ay ku adkaadaan si ay u helaan ogolaasho la ogeysiiyey, waxaanan ku sharxi doonaa fursado yar oo kiisaskaas ah.
Ugu horeyn, mararka qaar weydii ka qaybgalayaasha inay bixiyaan ogolaansho la wargeliyay waxay kordhin kartaa khatarta ay wajahayaan. Tusaale ahaan, Encore, oo dadka weydiinaya dadka ku hoos nool xukunka xad-dhaafka ah in ay bixiyaan ogolaansho ah in kombiyuutarkooda loo isticmaalo cabbiraadda faafreebka Internet-ka ayaa laga yaabaa in ay meel dhigto kuwa ku qanacsan khatarta kordhaya. Marka ogolaanshuhu uu keeno khatar sare, cilmi-baarayaashu waxay hubin karaan in macluumaadka ku saabsan waxa ay sameynayaan ay yihiin dadweynaha iyo in ay suuragal tahay in ka-qaybgalayaashu ay ka soo baxaan. Sidoo kale, waxay dalban karaan oggolaansho kooxo ka wakiil ah kaqaybgalayaasha (tusaale, NGO-yada).
Marka labaad, mararka qaarkood si buuxda loo ogeysiiyo ka hor inta aan la bilaabin daraasadda, waxay hoos u dhigaysaa qiimaha sayniska ee daraasadda. Tusaale ahaan, Fikradaha Dareenka, haddii kaqeybgalayaashu ay ogaadaan in cilmi-baarayaashu ay sameynayaan tijaabo ku saabsan dareenka, taasi waxay bedeli kartaa dabeecaddooda. Ka reebista macluumaadka ka qaybgalayaasha, iyo xitaa khiyaanayn, maaha wax caadi ah cilmi-baaris bulsheed, gaar ahaan shaybaarka tijaabada ah ee cilmi-nafsiga. Haddii oggolaansho la wargeliyo suurtagal maaha inta aan la bilaabin daraasadda, cilmi-baarayaashu waxay (iyo inta badan samaynayaan) ka-qaybgalayaashu ka- doodayaan kaddib marka daraasaddu dhammaato Dareemidda guud ahaan waxaa ka mid ah sharaxaadda wixii run ahaantii dhacay, wax ka qabashada waxyeellada, iyo helitaanka ogolaansho ka dib xaqiiqda. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira doodo, si kastaba ha noqotee, haddii wax laga qabanayo tijaabooyinka goobaha ay ku habboon yihiin, haddii doodda lafteeda ay dhibaato u geli karto ka qaybgalayaasha (Finn and Jakobsson 2007) .
Seddexaad, mararka qaarkood waa mid si aan macquul ahayn u helitaanka ogolaansho la ogeysiiyey qof walba oo saameynaya daraasaddaada. Tusaale ahaan, ka fikir qof cilmi-baare ah oo raba inuu barto Bitcoin-blockchain (Bitcoin waa lacagta lagu shubo oo loo yaqaan 'blockpain' waa xayndaab guud oo ku saabsan dhammaan macaamilada Bitcoin (Narayanan et al. 2016) ). Nasiib darro, waa suurtagal in la helo ogolaansho qof kasta oo isticmaala Bitcoin sababta oo ah dad badan oo ka mid ah dadkaasi waa qarsoodi. Xaaladdan, cilmi-baaruhu wuxuu isku dayi karaa inuu la xidhiidho muunad ka mid ah dadka isticmaala Bitcoin oo waydiiso ogolaanshahooda wargalinta.
Saddexdaas sababood ee sababta cilmi-baarayaashu aysan awoodin inay helaan qatarta sii kordheysa ee ogolaashaha, oo ka yaraynaya ujeedooyinka cilmi-baarista, iyo xaddidnaanta saadka-maaha sababaha kaliya ee cilmi-baadhayaashu ay u adkeeyaan helitaanka ogolaansho wargalin ah. Xalalka aan soo jeediyay-dadweynaha ayaa ku saabsan cilmi baarista, awood u siinaya, ka-raali-galinta ka-qaybgalayaasha saddexaad, kala-doodidda, iyo raadinta ogolaansho laga helo muunad ka-qaybgalayaasha- suurtagal ma noqon karto dhammaan kiisaska. Intaa ka sokow, xitaa haddii ay suurtagal tahay suurtagalnimada, waxaa laga yaabaa inaysan ku filneyn daraasaddan. Laakiin tusaalooyinkan muujinaya, si kastaba ha ahaatee, waa in ogalaashaha la wargeliyay uusan ahayn mid dhan ama waxba, iyo in xalalka hal-abuurka ahi ay hagaajinayaan isku dheelitirka anshaxa ee daraasadaha aan heli karin ogolaansho buuxda oo laga helo dhammaan dhinacyada saameysey.
Si loo soo gabagabeeyo, halkii laga rabo "oggalaansho wax ku ool ah wax kasta," cilmi-baarayaashu waa inay, raacaan, raacaan qaanuun adag oo adag: "nooc ka mid ah ogolaansho badan ee waxyaallaha." Marka la eego mabaadiida, ogolaashaha la ogolyahay maaha lagama maarmaan mabaadi'da ixtiraamka dadka (Humphreys 2015, 102) . Dheeraad ah, ixtiraamka dadka waa mid ka mid ah mabaadiida u baahan in la isku dheellitiro marka laga fiirsanayo anshaxa cilmi-baarista; waa inaysan si toos ah u dhaafin faa'iidada, Cadaaladda, iyo ixtiraamka Sharciga iyo Dulmiga Dadwaynaha, dhibcaha ay ku celceliyaan akhlaaqda 40kii sano ee la soo dhaafay (Gillon 2015, 112–13) . Waxaa lagu muujiyay qaabdhismeed anshaxeed, oggalaansho la ogeysiiyay oo dhan waxuu yahay jihad aan caadi aheyn oo dhibbanaha u dhacaya xaaladaha sida Bambiyada Time (fiiri qaybta 6.5).
Ugu dambeyntii, sida arrin wax ku ool ah, haddii aad ayaa ka fiirsaneysa inay samaynayaan cilmi la'aan nooc kasta oo ogolaansho, markaas waa in aad og tahay in aad ku sugan tahay meel cawlan. Taxaddar. Fiiri dib muran ka anshaxa in cilmi ka dhigtay si ay u qabtaan waxbarashada tijaabo takoorka iyada oo aan oggolaansho. Ma xaq aad u xoog badan? Sababtoo ah oggolaansho la wargeliyey xudun u yahay aragtiyaha badan jiifay anshaxa, waa in aad ogtahay in aad tahay, waxaa loogu yeedhi doonaa si ay u difaacaan go'aamada aad.